सामाजिक मिडिया को5मिथक | Martech Zone
सामाजिक मिडिया को5मिथक
सोमबार, नोभेम्बर 2, 2009 सोमबार, फेब्रुअरी 8, 2016 Douglas Karr
यो दोहोरिएको पोष्ट हुन सक्छ ... तर मैले वास्तवमै यसलाई जोड दिन आवश्यक पर्दछ। मैले धेरै कम्पनिहरु सबै सामाजिक मीडिया रणनीतिहरु मा ठोकर देखेको छु। तिनीहरूले अन्ततः यसलाई पूरै छोडिदिए। मैले तिनीहरूलाई जवाफ दिन सक्दिन भन्ने प्रश्न किन उनीहरूले पहिलो स्थानमा प्रयास गरे?
म सोशल मीडियाको बारे एक एम्पलीफायरको रूपमा सोच्न चाहन्छु… an अविश्वसनीय शक्तिशाली एम्पलीफायर। यदि तपाईंसँग सार्वजनिक सम्बन्ध र मार्केटि ofको एक ठोस आधार छ, र दुवै अधिग्रहण र अवधारण प्रभावी ढ .्गले कभर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको महान कार्य वास्तवमै बाहिर खडा हुनेछ जब तपाईं अनलाइन प्रतिष्ठामा संलग्न हुन र निर्माण गर्न थाल्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग मध्यम पीआर र मार्केटिंग रणनीति छ भने, सोशल मिडियाले यसलाई नष्ट गर्न सक्दछ।
मेरो सामाजिक मिडिया मार्केटिंग को5मिथक
सामाजिक मिडिया एक वेबसाइट को बदल्छ। तपाईं अझै एक ठाउँ चाहिन्छ लीड क्याप्चर गर्न र तपाईंको कम्पनीको उत्पादनहरू वा सेवाहरूतर्फ ध्यान आकर्षित गर्न।
सामाजिक मिडिया ईमेल मार्केटिंग प्रतिस्थापन गर्दछ। ईमेल हो धक्का विधि जुन ग्राहक र सम्भावितलाई सूचित गर्दछ जब तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्नु आवश्यक हुन्छ। वास्तवमा, सामाजिक मिडियालाई सामाजिक साइट प्रयोगकर्ताहरू फिर्ता आउन राख्न धेरै ईमेल संचारको आवश्यकता छ। लिंक्डइन, फेसबुक, र ट्विटरबाट तपाईले पाउनुहुने सबै ईमेलका बारे सोच्नुहोस्!
सामाजिक मिडियाको उच्च उपयोगको अर्थ यो विज्ञापन गर्नको लागि राम्रो ठाउँ हो। सामाजिक मिडिया विज्ञापन फ्याँक्न केहि छैन को शीर्ष मा, यो भित्रबाट संचार गर्न केहि हो। धेरै कम्पनीहरूले ब्यानर विज्ञापन र सामाजिक मिडिया साइटहरूमा टेक्स्टल विज्ञापनको लागि पैसा खसाल्छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूको कहिल्यै खरीदको आशय हुँदैन।
सामाजिक मिडिया प्रभाव मापन गर्न सकिदैन। सामाजिक मिडिया प्रभाव गर्न सक्छन् नाप्नुहोस्, यो प्रभाव मापन गर्न केवल अधिक गाह्रो छ। तपाईंले रोजगार लिन आवश्यक छaबलियो विश्लेषण प्याकेज - हुनसक्छ एक सामाजिक मिडिया एकीकरणको साथ, वा आंकडा कसरी तपाइँको हालको बाट प्रभावी ढ code्गले डेलिफाइ गर्ने विश्लेषण प्याकेज सामाजिक मिडिया बाट लीड्स र रूपान्तरण क्याप्चर गर्न।
सामाजिक मिडिया सरल छ, तपाईं मात्र गर. होईन! सामाजिक मिडिया सरल छैन। एक लंच पार्टी मा भइरहेको कल्पना र एक संभावना संग आफ्नो उत्पादनहरु र सेवाहरु मा बोल्दै। ऊ मुस्कुराउँदछ, तपाई मुस्कुराउनुहुन्छ, उसले एक प्रश्न सोध्दछ, तपाईं सबै सही उत्तरहरू भन्नुहुन्छ ... तपाईं खाजाको लागि तिर्नुहुन्छ ... तपाईंले आफ्नो भरोसा लिनुभयो। अनलाइन, तपाईले उनीहरूलाई आउँदै गरेको देख्नु हुन्न, तिनीहरू कहाँ गए भनेर कहिले पनि तपाईंलाई थाहा हुँदैन, तिनीहरू यो पनि थाहा हुन्छ कि तिनीहरू तपाईं भन्दा धेरै ज्ञानी छन्।
सोशल मीडियाले कसैको साथ विश्वास निर्माण गरिरहेको छ जुन तपाईंले कहिल्यै नभेटाउनु भएको हुन सक्छ। यो गाह्रो छ, यसले समय लिन्छ ... यो म्याराथन हो, स्प्रिन्ट होइन। सामाजिक मिडिया धेरै कम्पनीहरु विफल किनभने तिनीहरूले स्रोतहरु र समय को कम लगन को गति निर्माण गर्न को लागी लिन्छ। उनीहरूले महसुस गर्दैनन् कि यो लामो अवधिको लगानी हो, छोटो अवधिको रणनीति होइन।
रणनीतिको साथ, तपाईं फाटक बाहिर विस्फोट गर्न र अपेक्षाहरू भन्दा बढि तपाईंको व्यवसाय बढाउन सक्नुहुन्छ। यो बिना, तपाईं तौलियामा फाल्न सक्नुहुनेछ।
यो नै कारण हो कि साउथवेस्ट एयरलाइन्स र जाप्पोस सोशल मिडियाको साथ सफल हुन सक्छन्, तर युनाइटेड एयरलाइन्स र डीएसडब्ल्यूले राम्रो गरिरहेका छैनन्। दक्षिण पश्चिम एयरलाइन्स र Zappos शानदार, ग्राहक केन्द्रित कम्पनीहरू थिए पहिले सामाजिक मिडिया यस बिन्दुमा विकसित भयो। युनाइटेड एयरलाइन्सले उनीहरूको वैधानिकता र स्थिर नेतृत्व दिएर कहिले पनि सोशल मिडिया रणनीति अपनाउन सक्नेछैनन्।
आज रियल इस्टेट बारकैम्प इन्डियानापोलिसमा प्यानलिस्टको रूपमा, तपाईंले कोठामा एजेन्सीहरू र दलालहरूको दायरा देख्न सक्नुहुनेछ। केहि राम्रा साथी र क्लाइन्ट पाउला हेनरी (दुबै) लाई राउन्डपेग र DK New Media उनको मद्दत गर्नुहोस्), यति टाढा स्प्रिन्ट गर्दै कि उनीहरूले वास्तवमै सबै परम्परागत मिडियालाई रद्द गरिसकेका छन् र पूर्ण अनलाइन छन्। पाउलाको समस्या छैन कसरी नेतृत्व प्राप्त गर्ने... यो उनको सामाजिक मिडिया रणनीति यो गति मा छ जब यो सबै आफ्नो सुराका सबै काम गरीरहेको छ कसरी राख्न छ।
कोठामा अन्यहरूले अझै पनि कर्भ पछाडि काम गरिरहेका थिए ... कुनै ट्विटर, कुनै फेसबुक, कुनै अनलाइन व्यक्तित्व, कुनै खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, कुनै ब्लगिंग, आदि। यी मान्छेहरूलाई एक प्रभावशाली अनलाइन मार्केटिंग रणनीति निर्माण गर्न धेरै ढिलो भएन ... तर यो पनि हो तिनीहरूलाई मेरो नम्र रायमा सोशल मिडिया रणनीतिमा उत्र्न चाँडो नै।
नयाँ व्यक्तिहरूले सवारी गर्नु अघि कसरी हिड्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ। तिनीहरूलाई एक प्रभावी वेब साइट चाहिन्छ जुन ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न सक्दछ र रियल्टरसँग संलग्न हुन सम्पर्क जानकारी प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले अनुसन्धान गर्न र कुञ्जी शब्दहरूको उपयोग गर्न आवश्यक पर्दछ जुन उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ - सहित छिमेक, जिप कोडहरू, शहरहरू, काउन्टीहरू, स्कूल जिल्लाहरू, आदि। तिनीहरूले नेतृत्व र अघिल्लो ग्राहकहरु संग सम्पर्क मा एक ईमेल न्यूजलेटर रोजगार गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई तैनात गर्नु पर्छ घर जग्गा मोबाइल समाधानहरू उडानहरू बदल्नको लागि तिनीहरू गुणहरू अगाडि स्टफिंग राख्छन्।
सामाजिक मिडिया तपाइँको बिक्री कीप मा नेतृत्व को एक अविश्वसनीय मात्रा प्रदान गर्न सक्छ ... तर तपाईं ठाउँमा बिक्री फनेल हुनु पर्छ, परिणाम को प्रभाव मापन, र नियमित रूप मा पालन पोषण र सीसा र ग्राहकहरु कब्जा गर्न आफ्नो मार्केटिंग कार्यक्रम को काम। सामाजिक मिडिया अर्को आउँदछ ... एक अविश्वसनीय प्रभावी मार्केटिंग कार्यक्रम प्रवर्धन र अधिकार र पारदर्शिता बढ्दै जाँदा बाहिर लहर सुरु।
टैग: इमेल मार्केटिङमिथकहरूसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया मार्केटिङसामाजिक मिडिया मिथक
थिंकवाइनको साथ अनुमानित मार्केटिंग एनालिटिक्स
तपाईंको फूलाइएको वेबसाइट लीड अयोग्य छ
नोभेम्बर,, २०१ at 3::2009 बिहान
नमस्ते डग, महान पोष्ट।
अधिक व्यक्तिहरूले "सोशल मीडिया एक केकवाक हो" मिथक बस्ट गर्न आवश्यक छ। म अफिसमा केवल प्रारम्भिक धर्मपुत्र हुँ, र प्रबन्धकले मलाई एक घण्टा दुई घण्टामा "ट्विटर सही तरिकाले प्रयोग गर्न सिकाउन" भनेर सोध्नु भएको समयले मलाई हैरान पारेको छ। यी चीजहरू लिन्छन् समय, प्रतिबद्धता - र सिक्ने इच्छा। व्यक्तिहरू एसएममा केवल द्रुत फिक्सहरू चाहन्छन्, किनकि उनीहरूलाई लाग्छ यो नगद कमाउने द्रुत तरीका हो। यो वास्तवमा हैन, र तपाईंले गरेर सिक्नु पर्छ।
नोभेम्बर,, २०१ at 4::2009 बिहान
ठीक भने, एन्ड्र्यू! जब मान्छेहरू भन्छन् "मलाई कसरी यो सहि तरिकाले प्रयोग गर्न सिकाउनुहुन्छ", कहिलेकाँही यसको मतलब ... "हामी कसरी यो टेक्नोलोजीलाई हाम्रो आफ्नै फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्न सक्छौं"। म दौडिन्छु ... चिच्याउँदै! 🙂
नोभेम्बर २०, २००। 3::2009 अपराह्न
राम्रो लेख, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो अफिसमा सामाजिक मिडिया को केहि पक्षहरु को बारे मा धेरै भ्रम भएको छ, मँ अफिस को आसपास यो ईमेल गर्न जाँदैछु!
धन्यवाद जो! यदि तपाईंको कार्यालयलाई अलि गहिरो खन्न आवश्यक छ भने, त्यो हो DK New Media गर्छ! मलाई थाहा दिनुहोस् यदि हामी मद्दत गर्न सक्दछौं भने।
@douglaskarr तपाईंको अंतर्दृष्टि स्फूर्तिदायक छ, विशेष गरी तपाईंको बिदाइ गर्ने शट कि सबै एसएममा भाग लिन तयार छैनन्। पक्कै पनि, जसले एसएम नेटवर्कलाई प्लास्टर विज्ञापन सन्देशहरूको अर्को स्थानको रूपमा देख्दछन् उनीहरूले त्यो नेटवर्कले प्रतिनिधित्व गरेको कुराको मौलिक अभावको विश्वासघात गर्दछन्।
धेरै धेरै Scubagirl15 धन्यवाद! यो सबै एक रणनीति को साथ शुरू हुन्छ ... प्रविधि मात्र लागू गरिनु पर्छ सबै लक्ष्यहरू परिभाषित भएपछि। धेरै धेरै मिडिया मिल्ने व्यक्तिहरू प्रयास गर्न र सामाजिक मिडिया लिन र यसलाई एक कम्पनीले भोगिरहेका सबै समस्याहरूमा फिट बनाउन चाहन्छन्। तपाइँको दयालु टिप्पणीहरुको कदर गर्नुहोस्!
मलाई मेरो सामाजिक मार्केटिंग खेलमा फिर्ता जान जरुरी छ। दिनहरू यति धेरै परिवर्तन हुन्छन्। मैले प्रयोग गर्ने सबै विधिहरू अब प्रभावकारी देखिँदैन। तर तपाईंले निश्चित रूपमा केहि चीजहरू पत्ता लगाउनुभएको छ जुन मैले पहिले सोचेको छैन, र म यसको कदर गर्छु! मँ मेरो बट फिर्ता गियर मा प्राप्त र पनी चाँडै सामाजिक मार्केटिंग को फाइदा लिन पर्छ!
ट्र्याक्शन हराउने बारेमा धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी अझै पनि सामाजिक मार्केटिंगको प्रारम्भिक जंगली पश्चिम दिनहरूमा छौं र सिक्नुपर्ने धेरै छ। पहिले केहि लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्, रणनीति बनाउनुहोस् ... र यदि सामाजिक मिडिया मार्केटिंगले भूमिका खेल्न सक्छ र स्रोतहरूलाई सकारात्मक आरओआई दिन्छ ... तब यसको लागि जानुहोस्!
जस्तो सँधै ... उत्तम सल्लाह, एक महान मनोवृत्तिको साथ अन्तर्दृष्टि! धन्यवाद डग!